Thursday November 26, 2020 - 12:21:17 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Cudurka Carona Virus ayaa shalay halaaggii ugu badnaa ka geystay dalka Mareykanka muddo sedax bilood gudahood ah, waxaa lasoo sheegayaa in kumanaan kun ay shalay ku dhinteen gobollada kala duwan ee wadankaas halka uu soo ritay dad ka badan boqol kun
Cudurka Carona Virus ayaa shalay halaaggii ugu badnaa ka geystay dalka Mareykanka muddo sedax bilood gudahood ah, waxaa lasoo sheegayaa in kumanaan kun ay shalay ku dhinteen gobollada kala duwan ee wadankaas halka uu soo ritay dad ka badan boqol kun oo ruux.
Shalay waxay u aheyd dadka american-ka ah maalin kale oo ay sagootiyeen kumanaan kamid ah ehelkooda sababa laxiriira caabuqa Covid19 oo wadanka si xowlli ah ugusii faafaya.
gelinkii dambe ee maalintuu Arbacada ayuu Mareykanku diiwaan geliyey dhimashada in kabadan 2,400 oo qof kuwaas oo u dhintey virus-ka corona ee sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka waana tiradii ugu badneyd ee maalin qura uu cudurku dilo in ka badan lix bilood sida lagu sheegay xog ay daabacday Jaamacadda Johns Hopkins.
Xogta jaamacadda oo loo wax ku dhisatay tixraaca bukaanada iyo dhimashada ka dhalatay cudurka Covid-19 ayaa muujisay in inta u dhaxeysa 20:30 fiidnimadii Talaadada iyo 20:30 fiidkii Arbacada Mareykanka uu diiwaan geliyay 2,439 dhimasho ah iyo bukaanno cusub oo gaaraya 200 kun.
Tani waa maalintii labaad oo isku xigta oo tirada dhimashada ee Covid-19 ee Mareykanka ay kor u dhaaftay laba kun, Markii ugu dambeysay ee tirada dhimashada maalin kasta ay dhaafto 2,400 oo kiis ayaa ahayd bishii Maarso, xilligaas oo i masiibada ku dhacday Mareykanka ay mareysay meeshii ugu sarreysay.
Mareykanka oo dhowr toddobaad ka hor laga dareemay koror cusub oo faafa, waa waddanka kaalinta koowaad uga jira dhimashada ugu badan ee caabuqa Carona uu ka geystay caalami ahaan tiradaasina waxay gaartay 262,080 dhimasho ah.
Mareykanka sidoo kale waa dalka ugu horeeya adduunka marka la eego tirada dadka uu ku dhacay viruska maadaama tirada la xaqiijiyay ee cudurka loo yaqaan 'Covid-19' ay ka badantahay 12.7 milyan oo kiis, taas oo ku dhow shan meelood wadarta tirada guud ee kiisaska caabuqan halista ah ee laga diiwaan geliyay adduunka tan iyo markii uu soo ifbaxay Carona dabayaaqadii sanaddii 2019 xiligaas oo uu shiinaha kasoo bilaawday.
Natiijadani waxay timid xilli murun siyaasadeed oo ka dhashay doorashooyinkii mareykanka ay wadanka ka taaganyihiin islamarkaana malaayiin ruux oo kamid ah taageerayaasha Trump ay iska diideen in ay u hoggaansamaan awaamiirta kala fogaanshiyaha si Carona looga feejignaado.
Joe Biden oo ah madaxweynaha cusub ee Mareykanka ayaa ballan qaaday in uu waxbadan ka qaban doono faafinta cudurka Carona isagoo dadka faray in ay guryahooda ku ekaadaan inta ay aafadani kusii faafayso dhammaan magaalooyinka